Adeegga online lacag la'aan ah. duruf calculator
Xisaabinta mugga alwaax miinshaarna
Dooro xogta bilowga ah ee xisaabinta
Tirada burburiyeen N
Tirada halkii mitir cubic E
Qiimaha 1 cubic meter
xisaab alwaaxda miinshaarna
W - Width guddida
H - oo dhumucdiisuna waxay guddiga
L - Dhererka looxyada
xogta bilowga ah
N - Tirada burburiyeen
E - Tirada halkii mitir cubic
Badan oo dhismaha gurigaaga ama bad kulantay baahida loo qabo in loo xisaabiyo inta duruf waxaa looga baahan yahay shaqada. Sii go'aanso sida badan aad u baahan tahay si ay u koraan ama dogob, si fudud. Laakiin qiimaha for duruf waxaa inta badan lagu qeexay halkii mitir cubic, oo ay dhacdo in this waa ka badan habboon in la isticmaalo for xisaabinta barnaamijka gaarka ah. By isticmaalaya our site aad, isagoo garanaya oo dhererkeedu wuxuu, width oo dhumucdiisuna waxay of guddiga, iyo sidoo kale ay tirada xabbadood, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u xisaabiso inta cubic mitir ee duruf waxaad u baahan doontaa iyo inta ay ku kici doonto mid cubic meter ama loox noqon doonaa.
alwaax miinshaarna waa waxa loo yaqaan sidaas maxaa yeelay, way helay rinjiga leh ee jirridda geedka a. duruf loo isticmaalo dhismaha, alaabta guriga, noocyo kala duwan oo baakadaha iyo waxyaabaha kale. Maanta, noocan ah qalabka dhismaha waa kuwa ugu caansan. Wood loo isticmaalo in laga sameeyo alwaaxda waa wax an qalabada fiican, haysaa qoyaan ah oo deggan oo u baahan ma daaweyn gaar ah iyo daryeel, taas oo ka dhigaysa waxaa gaar ahaan ku haboon.
Waxaa loola jeedaa alwaax miinshaarna, guddiga af leh, unedged, tareenka dhismaha. Bruce waa alwaax ah, oo dhan walba laga baaraandegi. Sida uu jaray a cross square ama qaab qaybta. alwaax ugu badan loo isticmaalo dhismaha guryaha, bad iyo naqshado dabaqa.
Goynta guddiga waa alwaax wejiyo in si firfircoon loo isticmaalaa in shaqada dhismaha ka baxsan dhismaha, iyo in design ah ee bannaan ee gudaha. Goynta guddiga ku-qaybta cross waa laydi ah elongated. guddiga Unedged ka duwan qarka u ah in geesaha ay lagama baabbi'in doono, si ay u weli daaha muuqda geedka jilif, kaas oo cut guddiga this. Dhisidda tareenka ama bar bar waa a, a cross-qaybta ka yar caadiga ah, oo si weyn loo adeegsado dhismaha.
alwaax miinshaarna waa ku kala duwan yihiin nooca, oo ka samaysan yihiin. Waxay iyaga ka dhigi geedaha dhilka, sida geed, gran iyo larch. Oo tir tiro, sida geedkii ku, Beech, bjørk, Aspen.
Waxaa jira alwaax sida qoyaan. Waxay kala qaybsan yihiin cayriin la heer qoyaan ka badan 22 boqolkiiba oo qalalan leh qoyaan hoos ku boqolkiiba 22. First isticmaalay hawshii dhismaha, iyo kan dambe ee wax soo saarka ee alaabta guriga.
Waxa kale oo jira dhawr nooc oo duruf. fasalka Doorashada waxay ku xiran tahay codsiga. Sidaas daraaddeed, Waayo, alaabta qalabka fasalka waxaa loo isticmaalaa sare. Waayo, joinery iyo moldings haboon fasalada duruf 1 iyo 2 iyo 3 fasalka waxaa keliya loo isticmaalaa sida guddiga dhismaha ah.
Talo ku saabsan kaydinta
Duruf, haddii aan isticmaalo muddo dheer, waxay u baahan yihiin in laga ilaaliyo qoyaanka. Tani waxay keeni kartaa in ay sii xumaato. Waxaa laguma talinayo in duruf dukaanka Mire Waqaf on top of kasta oo kale. Inta u dhaxaysa layers oo looxyada ama looxaan waa in saareen.